Wararka – Af Soomaali | Buhodle News Network
Muuse Biixi Cabdi (Handaraab) ayaa isku dhex yaacay dhawaan ka dib markii uu meel fagaare ah oo la isugu soo baxay ka sheegay wuuu ku tilmaamay ‘Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliland oo is badheedh ah usoo weerartay Soomaaliland, dagaalkiina weli socdo.’ Halkan ka dhegayso qaylo-dhaantii Muuse Biixi uu warkaa kaga dhawaaqay Hargeya. Please follow and like us:	Read More »
Maamulaha gobollada woqooyi ee Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dhawaaqay in uu bandoo ku soo rogey degmooyin ka tirsan gobollada Togdheer iyo Sanaag oo degmada Ceerigaabo ka mid tahay. Isagoo ugu marmarsoonaya wuxuu ku tilmaamay nabadgelyo-xumo iyo qalalaase ayaa Muuse Handaraab ku dhawaaqay in degmooyinka Ceel-Afweyn, Gar’adag iyo Ceerigaabo hadda wixii ka bilaabma lagu soo row bandow. Please follow ...	Read More »
Madaxsweynaha dawlad-degaanka Soomaalida Ethiopia mudane Mustafe Muxumed Cumar ayaa awaamiir cusul ka soo saaray xasilinta, dhawridda iyo dhaqangelinta nabadgelyada, amaanka iyo ammaanka dhulka. Madaxweyne Mustafe wuxuu ku nuuxnuuxsaday adkaynta nabadgelyada degaanka oo yiri waa mid u dan ah ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ku nool degaanka Soomaalida Ethiopiak. Wuxuu ka digay in ay jiraan wax uu ka tilmaamay haraadigii ...	Read More »
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdishu Enjineer Cabdiraxman Cumar Cusmaan – yariisow ayaa soo booqday ugana tacsiyadeeyey agoomihii aabbahood Axmed-Dawlo ee dhawaan goobtisa shaqo lagu diley, dabna la qabadsiiyey maydkiisa falkaas oo loogalay isir-nacayb. Engineer Yariisow wuxuu qoyskaas ballaaran oo ka kooban labo xaas iyo 12 carruur ah oo uu ka tegey marxuum Cumar-dawlo u fidiyey tacsi, isla markaana ...	Read More »
Kulan ballaadhan oo ay isugu yimaaddeen Waxgaradka iyo odayaasha Dhulbahante ee ka tirsan dawlad-degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka dhacay degaanka Shaxda kana tirsan degaanka DDSI. Waxgaradkaas iyo duqaydu waxay ku lafa gureen dhibaatooyinka baaxadda leh ee degaankooda ka jira iyo sida dawladihii kala dambeeyey DDSI wax horumar ah ugu qaban degaankooda. Waxay baaq u soo jeediyeen madaxweynahay cusub ee DDSI ...	Read More »